Nanomana ny Lalana i Jaona Mpanao Batisa | Fiainan’i Jesosy
Nanomana ny Lalana i Jaona Mpanao Batisa
MATIO 3:1-12 MARKA 1:1-8 LIOKA 3:1-18 JAONA 1:6-8, 15-28
NITORY SY NANAO BATISA I JAONA
MARO NO NATAO BATISA NA DIA TSY NY REHETRA AZA
Efa 17 taona teo ho eo izay no lasa hatramin’ny nanontanian’i Jesosy an’ireo mpampianatra tao amin’ny tempoly, tamin’izy 12 taona. Lohataonan’ny taona 29 izao. Maro no niresaka momba an’i Jaona havan’i Jesosy. Nitory tany amin’ny tanàna rehetra tany amin’ny faritra andrefan’ny Reniranon’i Jordana izy.
Manaitra be ny paozin’i Jaona sy ny zavatra nolazainy. Volon-drameva mantsy ny fitafiany, fehikibo hoditra no teo amin’ny andilany, ary valala sy tantelidia no sakafony. Ary inona no hafatra notoriny? “Mibebaha, fa efa manakaiky ny fanjakan’ny lanitra.”—Matio 3:2.
Faly be ny olona nandre an’i Jaona. Maro no nahatsapa fa nilaina ny mibebaka, izany hoe manova ny toe-tsaina sy ny fomba fiaina, ka miala amin’ireo zava-dratsy fanao taloha. Avy tany ‘Jerosalema sy eran’i Jodia ary ny faritra rehetra nanodidina ny Reniranon’i Jordana’ izy ireo. (Matio 3:5) Maro taminy no nibebaka. Nataon’i Jaona batisa izy ireo, ka narobony tao amin’ny ranon’i Jordana. Nahoana?
Batisa mariky ny fibebahana no nataon’i Jaona. Nasehon’ireo olona nataony batisa fa tena nibebaka izy ireo noho ny fahotany, izany hoe ny fandikany ny fifaneken’ny Lalàn’Andriamanitra. (Asan’ny Apostoly 19:4) Tsy ny rehetra anefa no nahafeno fepetra hatao batisa. Nisy mpitondra fivavahana atao hoe Fariseo sy Sadoseo nankeo amin’i Jaona ka nantsoiny hoe “taranaky ny menarana.” Hoy izy: “Mamoaza voa mifanentana amin’ny fibebahana, ary aza mihambo anakampo hoe: ‘Manana an’i Abrahama ho rainay izahay.’ Lazaiko aminareo fa hain’Andriamanitra ny manova ireto vato ireto ho lasa zanak’i Abrahama. Efa mipetraka eo am-pototry ny hazo sahady ny famaky, ka ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ary hatsipy ao anaty afo.”—Matio 3:7-10.
Nahasarika olona maro i Jaona, nafonja ny hafatra nambarany, ary maro no nataony batisa. Nisy mpisorona sy Levita nirahin’ny Jiosy hanontany azy àry hoe: “Iza moa ianao?”
Niaiky i Jaona hoe: “Tsy Kristy aho.”
Hoy indray izy ireo: “Iza àry e? I Elia ve?”
“Tsy izy aho”, hoy i Jaona.
“Ianao ve Ilay Mpaminany?”, izany hoe ilay Mpaminany lehibe nambaran’i Mosesy fa ho avy.—Deoteronomia 18:15, 18.
“Tsia!”, hoy i Jaona.
Nisisika ihany izy ireo nanontany hoe: “Iza àry ianao e? Lazao aminay mba hisy valin-teny hoentinay any amin’izay naniraka anay! Inona no lazainao momba anao?” Hoy i Jaona: “Izaho ilay miantso mafy any an-tany efitra hoe: ‘Ataovy mahitsy ny lalana halehan’i Jehovah’, araka ny nolazain’i Isaia mpaminany.”—Jaona 1:19-23.
Hoy indray izy ireo: “Koa nahoana àry ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na Elia na Ilay Mpaminany?” Hoy i Jaona: “Izaho manao batisa amin’ny rano, fa eo aminareo kosa misy olona iray mitsangana, izay tsy fantatrareo. Izy ilay ho avy ao aoriako.” (Jaona 1:25-27) Misy heviny lehibe ireo teny ireo.
Nanaiky i Jaona fa nanomana ny lalana izy, izany hoe nanampy ny olona hanana toe-po tsara hahafahan’izy ireo hanaiky ny Mesia nampanantenaina, izay ho lasa Mpanjaka. Hoy i Jaona momba ny Mesia: ‘Mahery noho izaho ilay ho avy ao aoriako, ka tsy mendrika hanala ny kapany akory aza aho.’ (Matio 3:11) Nilaza aza izy hoe: “Ilay ho avy ao aoriako no nialoha ahy, satria efa nisy talohako izy.”—Jaona 1:15.
Nety tsara àry ilay hafatra notorin’i Jaona hoe: “Mibebaha, fa efa manakaiky ny fanjakan’ny lanitra.” (Matio 3:2) Nampahafantatra ny olona izany fa kely sisa dia hanomboka ny fanompoany i Jesosy Kristy, ilay Mpanjaka voatendrin’i Jehovah.
Lehilahy nanao ahoana i Jaona ary inona no nataony?
Nahoana i Jaona no nanao batisa?
Inona no hafatra notorin’i Jaona ary nahoana izany no nety tsara?
Hizara Hizara Nanomana ny Lalana i Jaona Mpanao Batisa